Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Ku dhawaad ​​1 Milyan oo Robots ah oo hadda yaalla Warshado Shiinaha ah
Warbixinta cusub ee Robotics-ka Adduunka ee 2021 ee ay soo bandhigtay Ururka Caalamiga ah ee Robotics-ka (IFR) ayaa muujinaysa rikoorka 943,000 ee robots-warshadaha ee ka shaqeeya warshadaha Shiinaha maanta - koror 21%. Iibinta robots cusub ayaa si xoog leh u kordhay iyada oo ilaa 168,000 unug la soo diray 2020. Tani waa 20% in ka badan marka la barbardhigo 2019 iyo qiimaha ugu sarreeya ee abid loo diiwaangeliyo hal waddan.
"Dhaqaalaha Waqooyiga Ameerika, Aasiya iyo Yurub isku mar ma aysan la kulmin heerkooda hoose ee Covid-19," ayuu yidhi Milton Guerry, Madaxweynaha Xiriirka Caalamiga ah ee Robotics. "Amar qaadashada iyo soosaarka warshadaha wax soo saarka ee Shiinaha ayaa bilaabay kor u kaca rubuci labaad ee 2020. Dhaqaalaha Waqooyiga Ameerika wuxuu bilaabay inuu soo kabsado qeybtii labaad ee 2020, Yurubna wax yar ka dib ayay raacday."
Soo-saareyaasha Robot-ka Shiinaha ayaa inta badan u adeegi jiray suuqa gudaha, halkaas oo ay ku lahaayeen saamiga suuqa ee 27% sanadka 2020 (45,000 unug). Saamigani waxa uu lahaa xoogaa isbedel ah waxa uu ahaa mid joogto ah 8dii sano ee la soo dhaafay. 2020, rakibaadda robots-yada shisheeye - oo ay ku jiraan unugyo ay soo saaraan alaab-qeybiyeyaal aan Shiinees ahayn - ayaa si xooggan u kordhay 24% ilaa 123,000 unug sanadka 2020 iyada oo wadarta guud ee suuqa saamiyada 73%.
Rakibaadaha robotsyada caalamiga ah ayaa la filayaa inay si xoog leh u soo kabtaan oo ay u koraan 13% ilaa 435,000 unug sanadka 2021, sidaas darteedna ay dhaafaan heerka rikoodhka ee la gaaray 2018. Ku rakibida Waqooyiga Ameerika ayaa la filayaa inay kordho 17% ilaa ku dhawaad ​​43,000 unug. Rakibaadaha Yurub ayaa la filayaa inay koraan 8% ilaa ku dhawaad ​​73,000 unug. Rakibaadaha Robot-ka ee Aasiya ayaa la filayaa in ay dhaafaan 300,000-cutub oo ay ku daraan 15% natiijadii sannadkii hore.